Dawlada Jabouti Oo soo Dhawaysay Cunaqabataynta Laga Qaaday Eritrea. – Heemaal News Network
Dowladda Jabuuti ayaa si lama filaan ah usoo dhaweysay cunaqabateyntii hubka iyo xayiraadaha kaleba ee laga qaadday dalka Eritrea.
“Dowladda Jabuuti waxa ay soo dhaweyneysaa qaraarka Qaramada Midoobay ee uu tirsigiisu yahay 244 ee xallinta khilaafaadkii u dhexeeyay dowladaha Jabuuti iyo Eritrea”. ayaa lagu yiri war murtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti oo uu ku saxiixan yahay wasiirka arrimaha dibadda, Maxamuud Cali Yuusuf.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyay Jabuuti inay diyaar u tahay go’aanka lagu fududeynayo wax kasta oo lagu wada hadlayo oo ku aaddan dowladaha Eritrea iyo Jabuuti.
Kuxigeenkii Hore Ee Madaxa Sirdoonka Ethiopia Oo La Xidhay
Gudomiyaha Baarlamaanka Somaliya Oo Booqday Dekada Iyo Xarunta Baarlamaanka Jabuuti.(Sawiro)
Guddoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa maanta booqday dekeda weyn ee Magaalada Jabuuti iyo Xarunta Baarlamaanka Dalkaasi. Kormeerka guddoomiyaha ayaa waxa ku wehlinaayay guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti iyo masuuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti. […]
Wasiirada Arimaha Dibada Ee Somaliya, Itoobiya iyo Eritrea Oo Shir Loogu Gogol-xaadhyo Nabada Geeska Uga Furmay Jabuuti.
Saddexda Wasiirro arrimo dibedeed ee dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa gaaray dalka Jabuuti, kaddib shir madaxeedkii maalintii shalay magaalada Asmara ku dhaxmaray madaxweynayaasha saddexda wadan. Shirka ugu soo dhamaaday Jabuuti saddexda madaxweyne ayaa qodobadii […]
Jabuti Oo Sheegtay Inay Dekedaheedu Dabooli karaan Baahida Dalka Itoobiya.
Dowlada Jabuti ayaa ku dhowaaqday in ay dekedaheedu ku filan yihiin inay haqab tiraan baahida dowlada Itoobiya u qabto inay dibada wax u dhoofiso ama dibadda ka soo degsato. Madaxa Dekedaha dalka Jabuti Xasan Cabdilaahi […]